Hevitra MPANOHARIANA | Politika | 47
Ny adidy tsy maintsy efa
2007-09-24 @ 07:48 in Politika
Ny maraina alohan’ny handehanana hamonjy fiangonana aho no nandalo tao amin’ny birao fandatsaham-bato. Indreo miandry olona tonga hifidy ny mpikambana ao amin’ny birao. Tsy mila nilahatra, tsy mila niandry akory aza fa tonga dia nampandrosoina. Dia nojerena tao anaty lisitra ny anarana, fa tao amin’ny takelaka nosokafana teo anoloako dia izaho no fahatelo nifidy…amin’ny sivy ora sy sasany teo ho eo io ora io. Vita iny…ny mpikambana tao amin’ny birao anilan’ny nidirako aza moa dia nitanin’andro (mandra-paharivan’ny andro) ireo mpikambana ao amin’ny birao ireo.
Tonga indray aho ny hariva tokony ho tamin’ny enina ora sy sasany teo ho eo dia mbola tsy ampy mpanisa vato ny tao amin’ny biraom-pifidianako. Voatery niditra an-tsehatra aho satria nantsoina. Tsy dia hitako loatra aloha izay olana. Vita ny fanisam-bato tamin’ny fito ora teo ho eo. Vato vitsy ve no isaina tsy ho haingana dia vita ny raharaha? Eo amin’ny olona 300 eo ho eo hatrany isaky ny birao no navitrika tamin’ny fifidianana. Ampahaefatry ny mpifidy nisoratra anarana teo ho eo. Efa vitsy an’isa aloha no misy ahy amin’izay fotoana izay.
Rehefa natao indray ny fanisam-bato, noheveriko hiady ity baolina (Tim 10 ary avi 7 tao anatin’ny vato 20 voalohany teo ho eo) fa nitohy lavabe amin’izay ny an’ny antokoben’ny fitondrana. Arahabaina izany izay mandresy ary manaja ny demokrasia aho, izay ny safidin’ny be sy ny maro. Dia efa nanefa ny adidiko aho no fantatro ary tsy manenina amin’ny safidiko. Anjaran’izay tsy nifidy angamba ny hanenina rehefa lany ilay volavolan-dalàna (tsy nosoratan’ny fiaraha-monim-pirenena moa ilay hoe ahena ho 15 andro isan-taona sisa ny congé azon’ny mpiasa tsy miankina isan-taona ka marina ve sa tsia?) ho an’ny mpiasa dia samy mahazaka io. Tsy misy idirako ny amin’izany, hoy ilay nifidy tim izay. Eny ary ho’aho! Resy aloha ny nofidiako e!
Hilaza tsiraritra vitsivitsy aho aloha. Miainga tamin’ny fanisana aloha. Rehefa vita ny fanisana dia niteny ny sefo lefitry ny fokontany fa vato maty avokoa ny an’izay nifidy arema, tsy nahatonga vato ara-potoana tany amin’ny distrika manko ny arema teto Antananarivo. Gaga aho ka saiky niteny hoe efa nisy toe-javatra sahala amin’izany anie tamin’ny fifidianana teo aloha ka nahoana no misy fanapahan-kevitra sahala amin’izany tampoka teo? Kanjo moa dia nilaza haingana ny sefo fokontany hoe isaina ihany ny vaton’ny arema fa anjaran’ny HCC ny manapa-kevitra na manankery ireo vato ireo na tsia.
«Mialoha 1 2 3 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 51 52 53 Manaraka»